Thenga i-Vegan yaseKorea Red Panax Ginseng - Ukuthumela kwamahhala futhi akukho ntela | WoopShop®
I-Vegan yaseKorea Red Panax Ginseng
$ 97.99 Intengo ejwayelekile $ 139.99
Color Amabhodlela e-5 Amabhodlela e-2 Ibhodlela le-1
Amabhodlela e-5 Amabhodlela e-2 Ibhodlela le-1
I-Vegan yaseKorea Red Panax Ginseng - amabhodlela ama-5 ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
I-NET WT: ama-PC ayi-100
Isithako: Ukukhishwa kwamakhambi
Ubuningi: Ibhodlela elilodwa-amabhodlela ama-1
Inombolo imodeli: QF-10
Izithako: I-Korean Red Ginseng (i-Panax ginseng; impande) (Ubuncane be-5% yama-Ginsenosides), Ezinye Izithako: I-Capsule Yemifino, I-Non-GMO Rice Flour
Imikhombandlela: Thatha amaphilisi ama-2 / isikhathi esisodwa. Izikhathi ezi-1 nsuku zonke, okungcono ngokudla noma njengoba kuqondiswe uchwepheshe wezokunakekelwa kwempilo.
Vuselela Amandla Akho: Ufuna umfutho wemvelo? I-Health Nature Life I-Korean Ginseng iletha ukuqhuma okungaguquki kwamandla osukwini lwakho ngaphandle kwama-jitters, kukusiza ngokwemvelo ukukhulisa umkhiqizo, uhlale unamandla futhi ugxile, futhi wenze izinto zenzeke.
I-Ginseng Yendabuko yaseKorea: Izimpande zethu zitshalwe esifundeni saseKorea obekulokhu kukhula umuthi ngokwesiko amakhulu eminyaka. Impande ngayinye ikhethwe ngesandla futhi ivuthiwe ngenkathi iqukethe ubuncane be-5% yama-ginsenosides ukuqinisekisa ukuthi unamandla aphezulu nomkhiqizo omsulwa ozozizwa usebenza. Kuqinisekisiwe ukuvuselela amandla akho, ukugxila, imizwa, nokusebenza.
Izindinganiso Ezinhle Nemiphumela Emikhulu: Besifuna ukuletha isengezo esisebenzayo se-ginseng emakethe, nge-ginsenoside eqinile%, kepha ngaphandle kwenani lentengo ebizayo - futhi yilokho kanye esikwenzile. Ngama-capsules emifino ayi-120 asindayo, uthola ama-500mg caps of pure pure Panax ginseng root powder. Uma ufuna i-premium ginseng engeza ngentengo enkulu, ungabe usaya phambili!
I-Vegan & Non-GMO: Okwenziwe Ngokwesayensi Impilo Yemvelo I-Korea Ginseng ingokwemvelo, i-vegan, engeyona i-GMO, i-gluten-free, futhi ifika kalula ekugwinyeni amaphilisi emifino. Azikho izinto zokugcwalisa ezingadingekile, izivimbelakuvunda, izibophezelo, noma amakhemikhali ayingozi angena kuma-supplements ethu, akuqinisekise ngemiphumela emibi ongayifuni.
Kungani Impilo Yemvelo Yempilo yaseKorea Ginseng?:
Inani Elikhulu Nemiphumela Emikhulu: Besifuna ukuletha i-potency ginseng supplement ephezulu emakethe, ene-ginsenoside eqinile%, kodwa ngaphandle kwezindleko ezibizayo - futhi yilokho kanye esikwenzile. Ngama-capsules emifino ayi-100 asindayo, uthola ama-500mg caps we-Korean Panax ginseng impuphu emsulwa. Uma ufuna isengezo se-ginseng se-premium ngokuningi, ungabe usaya phambili!
Ufuna ukukhuthazwa emandleni nasekugxileni kwakho? I-Health Nature Life I-Korean Ginseng iletha ukuqhuma okungaguquki kwamandla osukwini lwakho ngaphandle kwama-jitters, kukusiza ukuthi wandise umkhiqizo, uhlale unamandla futhi ugxile, futhi wenze izinto zenzeke.
Ngaphambi kokuthatha lokhu noma okunye okunye ukwengeza, ngaso sonke isikhathi thintana nodokotela ukuze kuqinisekiswe ukuthi ngeke kube khona ukuxhumana okungahambi kahle nemithi ekhona. Sicela uqaphele uma uzwela kunoma iziphi izithako ezibalwe. Ngenxa yokuhlanzeka kwalo mkhiqizo, ezimweni ezingavamile, abantu abasebenzisa lo mkhiqizo bangathola ukungezwani komzimba, ukucindezeleka kokugaya ukudla, isisu esidabukisayo, isifo sohudo, ukuqunjelwa, isilungulela, igesi, ikhanda elibuhlungu, isiyezi, amajita, ubuhlungu besisu, ukugula, isicanucanu, ukukhathala, izinguquko kumfutho wegazi, ukuqunjelwa, ukucasuka, ukulala, ubuhlungu noma ukungaphatheki kahle. Ngenxa yamandla nobumsulwa balokhu kukhishwa kwe-Ginseng, ama-capsule awenzelwe ukuvulwa, ngoba azoba nokunambitheka nephunga elibukeka sengathi "linosawoti". Uma enye yalezi zimpawu iqhubeka, yeka ukusebenzisa ngokushesha bese uthinta udokotela noma uchwepheshe onelayisense. Sicela uxhumane nathi ukuthola imbuyiselo ephelele uma ngabe eminye yemiphumela yalo mkhiqizo inamandla kakhulu ukubekezelela. Ungasebenzisi uma uphawu oluzungeze i-cap luphukile noma lungekho.
Ukuzikhulula ngokomthetho: Ngaphambi kokuthatha lokhu noma okunye okunye ukwengeza, ngaso sonke isikhathi thintana nodokotela ukuze kuqinisekiswe ukuthi ngeke kube khona ukuxhumana okungekuhle nemithi ekhona. Izitatimende eziphathelene nezengezo zokudla azikaze zihlolwe yi-FDA futhi azihloselwe ukuxilonga, ukwelapha, ukwelapha noma ukuvimbela noma yisiphi isifo noma isimo sempilo.
Kushibhile futhi kuhle kakhulu kunokwanele ekuculeni ngaphakathi
Gcina ukwethembeka konke engikukhuthazayo kuyiqiniso
Amakhasimende asilinganisela nge-5.0 / 5 ngokususelwa kuzibuyekezo ze-74263.